महाधिवेशन, आन्दोलन र एकता र सहकार्यबारे केन्द्रीय बैठकले निर्णय लिनेछ -पालुङ्वा - Naya Online
महाधिवेशन, आन्दोलन र एकता र सहकार्यबारे केन्द्रीय बैठकले निर्णय लिनेछ -पालुङ्वा
नयाँ अन्लाईन शुक्रबार, माघ ११, २०७५ (January 25th, 2019 at 3:02am ) अन्तर्वार्ता, ब्रेकिंग न्युज
केपी पालुङ्वा, केन्द्रीय अध्यक्ष − राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी
अस्वस्थताको कारणले करीब एक महिना उपचार र स्वास्थ्य लाभ गर्नु भएका राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष केपी पालुङ्वा अब सकृयताका साथ राजनीतिक दौडधुपको तयारीमा हुनुहुन्छ । वर्तमान सन्दर्भमा पार्टीको बारेमा नयाँ अनलाईनको लागि कमल थापालेगरेको संक्षिप्त वार्तालाप −
राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीको गतिविधि बारे के भन्नुहुन्छ ?
यतिबेला पार्टीले आफ्नो २८औं वार्षिक उत्सव भर्खर सम्पन्न गरेको छ । प्रदेश ७ को धनगढी, प्रदेश ६ को विरेन्द्रनगर, प्रदेश २ को जनकपुरमा समेत यसपटक पार्टी स्थापना दिवस पहिलो पटक उत्साहका साथ मनाइयो । यस्तै यही माघ १५ र १६ गते प्रदेश ४ (तमुवान–मगराँत) को अधिवेशन सम्पन्न गर्न साथीहरू लागिरहनु भएको छ । स्थानीय क्षेत्रहरूमा साथीहरू आफ्नो तहबाट निरन्तर कृयाशिल रहनु भएको छ ।
पार्टी एकता अथवा मोर्चा निर्माण बारे पार्टीको वर्तमान लाइन के हो ?
यसमा पार्टी प्रष्ट छ । यसका लागि पार्टी संरक्षक श्रद्धेय एमएस थापा ज्यूको संयोजकत्वमा म र वरिष्ठ नेता डिके बुद्धिष्ट ज्यूको तीन सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति कृयाशिल छ । कुनै अमूक दलसंग मात्र होइन सम्भावित दलहरूसंग छलफलका क्रममा छौं । भएका कुनै पनि छलफल बारेको आधिकारिक रिपोर्टिङ्ग आगामी बैठकमा गर्नेछौं । के कुरा सम्भव छ भन्ने बारेमा पार्टीको आगामी बैठकले निर्णय गर्नेछ ।
कुनै दलसंग एकता प्रकृया टुङ्गोमा पुगेको अवस्था छ कि छैन ? छ भने कुन दलसंग अहिले एकता वार्ता टुङ्गोमा पुग्न लागेको छ ?
यस्तो विशिष्ट परिस्थिति बनीसकेको छैन । सम्भावनाहरू निर्माण गर्न हामी निरन्तर कृयाशिल छौं ।
सुन्नमा आए अनुसार राजपा वा संघीय समाजवादी फोरमसंग पनि एकता वार्ता निक्कै अगाडि बढेको छ भन्ने चर्चा छ । वास्तविकता के हो ?
यस्ता कुराहरू तपाइले कहाँबाट सुन्न भ्याउनु हुन्छ मै अचम्मित भए । मैले माथि नै भनिसकेँ अन्य दलहरूसंग वार्ता छलफल भइरहेका छन्, हुन्छन् । उच्च स्तरीय वार्ता समिति हामी नै हौं । एकता, सहकार्य साथै मोर्चा निर्माण के गर्न सकिन्छ, पार्टी र देशलाइ कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा हामीले हरदम पहल गरीरहेका छौं । तर राजपा वा फोरमसँग एकता वार्ता निकै अगाडि बढेको भन्ने सूचना वा समाचार चाहिं हल्ला मात्र हो ।
पार्टीको आगामी छैंठौं महाधिवेशन बारे के कस्तो निर्णय हुँदै छ त ?
यस बारेमा पनि आगामी संघीय परिषदको पूर्ण बैठकमा निर्णय लिइनेछ । त्यसैले यही माघको अन्तिम साता काठमाडौंमा बस्ने हाम्रो केन्द्रीय बैठक एजेण्डागत हिसाबले अत्यन्त महत्वपूर्ण हुनेछ ।